50 Ederede Njehie Na-aga n'ihu na-Ebu ndị na-ede blọgụ | Martech Zone
E nwere oge ụfọdụ na ọrụ m na mgbe m na-aga mahadum na m jụrụ ikike ide m. Obi dị m ụtọ, ịde blọgụ wee (ọtụtụ) ndị na-agụ akwụkwọ belata ụkpụrụ ọgụgụ ha. Ndị na - agụ akwụkwọ ji ekele na - enyocha njehie na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ, nkesa nkewa, homonụ, ngwaa na - agbanwe, prepositions, nnọchiaha aha, yana mperi nsị.
Ọ bụghị eziokwu n'oge gara aga, mana anyị niile bụ ndị edemede ọkachamara ugbu a. Ọ dịghị ụbọchị ndị ahịa ahụ ga-ede ederede blog, pịa mbipụta, akwụkwọ akụkọ, ihe ọmụmụ na email! A na-akwụ gị ụgwọ ide… ​​ị na-emejọkarị nsogbu ndị a?
Ndị Na-eme Ntugharị - Mee mgbe ị na-ede ahịrịokwu na nkebiokwu na nkebi ahịrịokwu metụtara nke a na-atụghị anya ya.
Uche - bụ mkpụrụokwu akpọpụtara otu, asụpe dị iche iche, nwee nghọta dị iche iche. Nke a nwere ike bụrụ njehie ederede kachasị m eme.
Gbasaa Infinitive - itịbe mgbe etinye adverb n'etiti iferi infinitive nke ngwaa (ntụgharị. To n'atụghị egwu gaa.
Ngabiga Ngabiga - ngwaa chọrọ ihe na isiokwu.
Ihe mbu - njikọ nouns, nnochiaha na nkebi ahịrịokwu na okwu ndị ọzọ na ahịrịokwu.
Ikwu Okwu - ikwu nnochiaha aha na, onye, ​​onye, ​​onye, ​​nke, olee ebe, mgbe, na ihe kpatara ya. A na-eji ha esonye nkebiahịrị iji mee ahịrịokwu dị mgbagwoju anya.
mkpoputa - ikwu okwu, onye ọ bụla?
Achọrọ m imeziwanye ederede m oge ọ bụla m nọdụrụ na keyboard. Achọrọ m ịmụta nuances ndị a nke Bekee. Ekwenyesiri m ike na m na-emehie ihe ọ bụla ọzọ post ma eleghị anya ọbụna karịa. Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị debe m n'eziokwu ma hapụ okwu ka m wee ghara imechu onwe m ihu mgbe niile. 🙂
N’etughi ogha n’iru, nkea bu ihe edeputara ide ihe iri ise (ewepu edemede edemede) nke amam n’ikpe ma obu mara m site na saiti ndi ozo. 5 Njehie nke Grammatical na eme ka i daa ogbi nke Brian Clark gara n'ihu na-akpali m!
50 Akara Ide Ihe na-emekarị
Mgbasa ozi ma ọ bụ tinye
Ọjọọ ma ọ bụ Ajụjụ
Ndụmọdụ ma ọ bụ Ndụmọdụ
Emetụta ma ọ bụ Mmetụta
Alot ma ọ bụ A otutu
Amoral ma ọ bụ Omume rụrụ arụ
Otu akụkụ ma ọ bụ Nke ọzọ
Gbaa mbọ ma ọ bụ hụ na ma ọ bụ insure
Ntughari ma obu Aghota
Nwa oge ma ọ bụ obere oge
Centrifugal ma ọ bụ Centripetal
Cite ma ọ bụ Site ma ọ bụ Anya
Collocated ma ọ bụ Colocated
Ihe mgbakwunye ma ọ bụ otito
Iju ma ọ bụ ide
Akọ na uche ma ọ bụ Amamihe
Kansụl ma ọ bụ Ndụmọdụ
Na-adabere ma ọ bụ na-adabere
Desert ma ọ bụ Deza
Enweghị mmasị ma ọ bụ enweghị mmasị
Kpughee ma ọ bụ Iwu
Emberass ma ọ bụ Embarrass
Entomology ma ọ bụ Etymology
Jụọ ma ọ bụ Jụọ
Gbaa mbọ hụ na ma ọ bụ amụma mkpuchi
Kwa ụbọchị ma ọ bụ Kwa .bọchị
Mee elu ma ọ bụ gaa n'ihu
Flaunt ma ọ bụ Flout
Nụrụ ebe a
Ọ bụ ma ọ bụ nke ya
Mara ma obu ugbua
Dina ma obu Igha
Ahapụ ma ọ bụ Ka anyị
Loose ma ọ bụ Lose
Ọnwụ ma ọ bụ Looser
Mil Milita ma obu mitigate
Akwụ ụgwọ ma ọ bụ akwụ ụgwọ
Omume ma ọ bụ Omume
Kpụrụ ma ọ bụ Isi
N'agbanyeghị ma ọ bụ na-agbanyeghị
Erylọ akwụkwọ ma ọ bụ Anyịnya
Karịa ma ọ bụ Mgbe ahụ
Ha bụ, nke ha ma ọ bụ ebe ahụ
Ga nke, Kwesịrị nke, Ike nke ma ọ bụ Ga- ve, Kwesịrị, ve, Ike?
Ebee ka anyi no ma obu anyi?
Kedu ma ọ bụ Nke ahụ
Ornye ma ọ bụ mnye
Gị ma ọ bụ Gị?
Gị ma ọ bụ m ma ọ bụ m
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgụkwu, achọpụtara m otu n'ime ederede edepụtara edepụtara na weebụsaịtị Paul Brian.
Enwere m ike iburu kalenda ụbọchị: Njehie a na-ahụkarị na 2010 n'iji kalenda eji eme ihe kwa ụbọchị. Nke a dị ugbu a na ndepụta m!
Ana m atụ anya ịgụ ihe ndị a. Enwere m mmejọ na post a, kwa?
Tags: grammarasusu asusuidehie ihe
Ọkt 1, 2009 na 10:41 AM
Nkwado bụ mmiri nke ọtụtụ ndị edemede. Ọbụna ndị na-asụ Bekee na-eme nke a.
Ọkt 1, 2009 na 4:04 PM
Daalụ ColonelJeff! Kedu otu asụsụ siri sie ike ma ọ bụrụ na ndị gụrụ akwụkwọ n’otu n’otu enweghị ike ịmụ ya? Anyị na-atụ anya na onye ọ bụla kwagara mba ọzọ bịara ịmụ ya… ikekwe atụmanya anyị dị elu!
Daalụ ColonelJeff! Kedu otu asụsụ si sie ike ma ọ bụrụ na ndị gụrụ akwụkwọ n’otu n’otu enweghị ike ịmara ya nke ọma? Anyi na-atu anya ka ndi obula kwabatara ka ha muta ya? Ikekwe atụmanya anyị dị ntakịrị!
Ọkt 1, 2009 na 12:22 PM
Kwuru nke ọma. Enweghị m ike ịsị na enweghị m ụta kpamkpam ma a bịa n'ihe banyere ịkọwahie okwu. Onwere ụbọchị m na-aga riff ma echeghị na m ga-asụpe akwụkwọ! Ekwughị na ọ mara mma, mana anaghị m echefu njehie okwu ole na ole ugbu a na ugboro ugboro na ntanetị. Ọ na-egosi na anyị bụ mmadụ, ama m na enweghị m onye editọ na-agụgharị ihe niile m wepụtara ebe ahụ: 0)
Ọkt 1, 2009 na 7:17 PM
Doug, onye nkụzi m nke 3 kụziiri m icheta na mgbe m na-eche echiche banyere ọzara ma ọ bụ ihe eji megharịa ọnụ iji cheta na ihe eji megharịa ọnụ nwere abụọ n'ime akwụkwọ ozi "s" b / c yummy treats dị okpukpu abụọ dị mma dị ka ájá ọsụsọ. Asila na onweghi ihe m mutara n’akam! 😉
Ọkt 2, 2009 na 2:07 PM
Daalụ maka ndepụta a, DK. http://bit.ly/LvNMv Anaghị m atụ aka edejọ m njehie m hụrụ, belụsọ na m ma onye ahụ. Na-agba mbọ 2 na-ebelata njehie na blọọgụ nke m. Bit.ly/AbLe8
Ọkt 5, 2009 na 12:42 AM
Daalụ maka post. Adị m, site n'okike, na-ahọrọ oke ụtọasụsụ na nsụpe (agbanyeghị, dịka mmadụ, m na-emehie ihe). Ya mere, enwere m obi ụtọ ịhụ ndepụta a. Tupu m atụnye aro ụfọdụ mgbakwunye na ndepụta ahụ, ọ ga-amasị m "idebe gị n'eziokwu" dị ka ị rịọrọ.
1) Na paragraf nke abụọ, ekwenyere m na ị bu n'uche ịsị "Ọ dịghị ụbọchị ndị ahịa ahụ na-aga emela nwere dee "mana ọ nwere ike bụrụ na m gụrụ m ahịrịokwu ahụ.
2) missed tufuo mmechi mmechi na ihe ndepụta "Split infinitives" (kwa, teknụzụ ndebiri "ntụgharị" kwesiri ka ekewaa ya oge).
Ugbu a, iji tinye ihe ole na ole ndị ọzọ m na-achọpụta na oge niile:
1) Zụtara ma weta - Ọtụtụ mmadụ dị iche n’echiche na ihe gara aga nke “zụrụ” bụ “ewetara” ọ na-agba m ara mgbe m hụrụ nke ahụ.
2) Oke, ruo na abuo (enweghị ike ikwenye na ahapụrụ ya na ndepụta gị).
3) Otutu / ekwenye na ekwenyeghi - Mu onwem n’emekarim ihe a, ma nmehie nke ndi mmadu n’eme nke a bu “ha,” “ha” ma obu “nke ha” mgbe ha na arutu aka n’otu okwu. "Ha" "ha" na "nke ha" ha niile dị ọtụtụ, yabụ na ha kwesiri izo aka n'ọtụtụ aha.
4) "Enwere m ike ilekọta obere" kama "Enweghị m ike ilebara obere anya."
5) Itinye na nọmba 41 gị, enweghị m ike ịnwụ mgbe m hụrụ ndị mmadụ ka ha na-ede okwu a "enweghị nchebara" (dịka a ga-asị na ọ bụ okwu n'ezie).
Ọzọkwa, Achọrọ m ime ka ọ mara (dị ka a ga-asị na ọ dị onye ọ bụla na-eche) na ọ na-agba m ume nke ukwuu mgbe m hụrụ ka ndị mmadụ na-ejedebe okwu ahịrịokwu. Ọ naghị enye m nsogbu oge ọ bụla m na-ege ntị n'okwu ọnụ, mana enweghị m ike iguzo hụ ya na ederede.
Ọkt 6, 2009 na 12:18 PM
Daalụ maka nlele a. Onye ọ bụla na-ede blọgụ kwesịrị ịgụ ya tupu izipu ya.
Amaghị ihe kpatara ya, mana ọ dị ka ọ dịkarịrị mfe ịchọpụta mmejọ na ederede ndị ọzọ…
Ian Stewart kwuru
Ọkt 8, 2009 na 3:49 PM
Emehiela m nke ndị edemede na-eme, maka m bụ Homonyms na nsụgharị nsụgharị.Enyochaghị m akwụkwọ ahụ 2010 Ajọkarị Njehie na Ntanetị Egwuregwu Bekee kwa ụbọchị mana ejiri m n'aka na ọ ga-enwerịrị mmejọ dị nzuzu ma ọ bụ nke nzuzu nke onye edemede mere.
Ọkt 11, 2009 na 9:43 PM
Site n'ụzọ, nọmba 25 bụ mpaghara nke 8.
Agbanyeghi na abughi m onye asusu bekee, a na m ahuru otutu n’ime ndia ma achoputara ha nke oma, karisia mgbe ndi asusu bekee mere.
Ọkt 16, 2009 na 6:14 PM
ị maara # 8 na # 26 bụ otu? ya mere, na nyocha, enwere naanị 49 na ndepụta a ;-)
Ọkt 16, 2009 na 6:21 PM
Enwere m ike ịme ka ị nwee mmasị na ịpụpụ site na elu?
Ọkt 16, 2009 na 6:26 PM
My pet peeve bụ mgbe nile n'iji ma were. Ha bụ echiche dịgasị iche iche. Otutu ndi mmadu adighi eme ihe ojoo "bia" na "go" na ntuzi aka ahu bu ihe butere "bute" na "were".
Ọkt 16, 2009 na 9:59 PM
Ndepụta dị egwu done mere nke ọma. Mana ebe ọ bụ na ị kpọtụrụ saịtị Paul Brian (lee ihe m mere ebe ahụ?), I kwesiri ịmara na nkewa nkewa abụghị ezigbo mmejọ - ha bụ naanị ihe ndị mmadụ kwenyesiri ike na ọ bụ mmejọ (ana m ata ụta na Bekee ndị nkuzi) ị nwere ike izere ha iji zere inwe arụmụka ahụ niile oge ọ bụla.
Dị ahụ na-akpasu m iwe n'ihi na ọ na-ewute anyị ịhapụ ndị mmadụ mụtara iwu ụgha, mana kedu ihe ị ga-eme. Ka o sina dị, lee ya anya - ị na-eme ka akụkọ ifo na-ekwu site n'ịsị na ịkọwawa infinitive na-emebi iwu.
Nov 5, 2009 na 6:18 PM
Obi dị m ụtọ na m chọtara ọtụtụ ndị chere na ụtọasụsụ ka bara uru. f Ana m echeta prọfesọ m nke Latin nke ọma, echiche nke infinitive nke sitere na ụlọ akwụkwọ echiche na-eji ihe niile Latinate akpọrọ ihe. Na Latin, ị naghị ekewa gị infinitive, yabụ n’ezie ị gaghị ekewa ha na Bekee! LOL
N'ihe metụtara ya, ọ na-emetụta ihe (amaghị m ihe ọ bụla) ụlọ akwụkwọ ndị dị na US na na mba Commonwealth na-ekwusi ike na ndị na-esite na mpụga gburugburu ahụ dee TOEFL. Akuziola m ụtọ asụsụ bekee na ịkọzigharị asụsụ bekee na mahadum maka ụmụ akwụkwọ afọ mbụ na nke abụọ, a zụlitere ha niile na Canada ebe m bi. Ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ ahụ ga-ede TOEFL, ana m eche na anyị ga-agbasi mbọ ike ịhazi onye si ebe.
Nov 5, 2009 na 7:33 PM
Nọgidenụ na-agụ, @ scubagirl15… Amaara m na ị ga-enwe ọtụtụ ihe mmụta maka m. 🙂 Ma egbula oge idozi m, ọ ga-akara m mma ka m daa ogbi ịgụ okwu karịa ka m ga-ada ogbi karịa 5,000 ị ga-ahụ mmejọ m na ntanetị!
Ndi Les Résoteurs
Jun 5, 2015 na 6:21 AM
Merci pour cet isiokwu!
Un bon check-up !! Chaque bloggueurs et nombreux ils sont devraient se lire avant de post leurs isiokwu na isiokwu a.
Néanmoins, il est vrai qu'avec un oeil extérieur na voit toujours les fautes des autres et rarement les siennes 😉